अमेरिकाले दियो ठुलो खुसि : परिक्षण गरेको औषधिले कोरोनाका बिरामी निको भएपछि, उपचारमा प्रयोग गर्न स्वीकृत ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/अमेरिकाले दियो ठुलो खुसि : परिक्षण गरेको औषधिले कोरोनाका बिरामी निको भएपछि, उपचारमा प्रयोग गर्न स्वीकृत !
अमेरिकाले दियो ठुलो खुसि : परिक्षण गरेको औषधिले कोरोनाका बिरामी निको भएपछि, उपचारमा प्रयोग गर्न स्वीकृत !
अमेरिकाले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि ‘रेम्डिसिभियर’ नामको एन्टिभाइरल औषधिलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।अमेरिकाकै औषधि कम्पनी ‘गिलियाड साइन्स’ले बनाएको औषधिलाई अमेरिकी सरकारले बिरामीमा प्रयाेगका लागि शुक्रबार स्वीकृति दिएको हो।
मानिसमा गरिएकाे परीक्षण क्रममा ‘रेम्डिसिभियर’ औषधिले कोरोना भाइरस नष्ट गरेको अनुसन्धाकर्ताले दाबी गरेका छन्।यो औषधिलाई अमेरिकी केन्द्रीय सरकारको औषधि स्वीकृतिसम्बन्धी आधिकारिक निकाय द फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले आपत्‌कालीन स्वीकृतिका रूपमा अनुमति प्रदान गरेको हो।
यसको अर्थ कोभिड-१९ को गम्भीर लक्षण देखिएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूमा उक्त एन्टीभाइरल औषधि प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर एफडीएको आपत्‌कालीन अनुमति भएकोले यो औपचारिक अनुमति भने होइन। औपचारिक अनुमतिका लागि थप अध्ययन आवश्यक पर्छ।
विज्ञहरूले भने इबोलाको उपचारका लागि विकास गरिएको र अमेरिकी कम्पनी गिलियडले उत्पादन गर्ने औषधि कोरोनाभाइरसविरुद्ध अचूक औषधि नभएको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँगको भेटमा गिलियडका प्रमुख कार्यकारी डानियल ओ’डेले एफडीएको स्वीकृती महत्त्वपूर्ण पहिलो कदम भएको बताए। उनले कम्पनीले उक्त औषधिको १५ लाख मात्रा सहयोगमा दिने पनि बताए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शुरूदेखि नै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण उपचारमा रेम्डेसिभिरको समर्थन गर्दै आएका छन्। यूएस न्याश्नल इन्स्टिट्यूट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्शस डिजीजेजले १,०६३ जनामाथि गरेको एक अध्ययनले त्यो औषधि प्रयोग गर्दा बिरामीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि विकसित भएका लक्षणहरू हराउने समय १५ दिनबाट ११ दिनमा झरेको देखिएको दाबी गरेको छ।
इन्स्टिट्यूटका प्रमुख डा. एन्थोनी फाउची भन्छन्, “तथ्याङ्कले रेम्डेसिभिरले निको हुने समय घटाउने स्पष्ट, महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक असर पारेको देखाएको छ।” तर रेम्डेसिभिरले निको हुन सहयोग गर्ने र मानिसहरूलाई सघन उपचार कक्षको उपचार आवश्यक नपर्ने बनाउन सक्ने देखिए पनि मृ/त्युबाट बचाउने स्पष्ट आधार भने नदेखिएको बताइएको छ।
विश्वभर सं’क्रमितको संख्या बढ्दै गएको र आर्थिक वि’श्रृंख’लता नि’म्त्याए’को कोरोनाभाइरसको औ’षधिले परीक्षणका क्रममा धेरै राम्रो काम गरेपछि सर्वत्र खुशीयाली छाएको छ । औषधिको परीक्षण निकै सफल भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै त्यसको स’कारात्मक असर वालस्ट्रिट सहित विश्वको शेयर बजारमा देखिएको छ ।
होली खेल्ने क्रममा काठमाडौँबाट बालिका वेपत्ता
हार्दिक बधाई ! BBS प्रथम बर्षमा धनकुटाकी समिता ढुङ्गेल नेपाल टप’